PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - Icebile ngezokuvakasha iking Cetshwayo EZOKUVAKASHA:
Icebile ngezokuvakasha iking Cetshwayo EZOKUVAKASHA:
Ilanga langeSonto - 2017-11-12 - Ezikaqedisizungu - LUCKY CAIN
NGONYAKA owedlule kushintshwe igama lomkhandlu Uthungulu waqanjwa ngokuthi yiking Cetshwayo District. Ukushintshwa kwegama Uthungulu kungenxa yokuthi ibingaqondakali incazelo eqondile yaleli gama, ngokusho kwemeya yalo Mkhandlu unkk Nonhle Mkhulisi.
Kodwa phakathi kwezinye zezizathu eziholele ekubeni lo Mkhandlu uqanjwe ngesilo ucetshwayo wukuthi sizalelwe ngaphansi kwawo, saphinde satshalwa enkandla okuyindawo nayo engaphansi kwawo.
Kuningi okuthinta isilo ucetshwayo ezindaweni ezingaphansi kwalo mkhandlu onomasipala okubalwa kubo umhlathuze okuyiwona ogabe ngokuletha umnotho, umlalazi, inkandla, umfolozi noMthonjaneni. UMKHANKASO WEZOKUVAKASHA Eminyakeni embalwa eyedlule lo mkhandlu usungule umkhankaso wezokuvakasha obizwa ngokuthi yikings Experience, okuhloswe ngawo ukuqhakambisa izindawo zokuvakasha ezingaphansi kwawo (umkhandlu).
Ngesikhathi wethulwa lo mkhankaso kumenywe osaziwayo abahlukene abadabuka ngaphansi kwawo okubalwa kubo ujessica Nkosi, odlala indawo kaqondi kwisibaya, uphindile Gwala odlala indawo kanoni kumuvhango, UDJ Amenisto, ujabulani Shandu Emtshana, Dumo Cebekhulu nabanye.
Kulo nyaka lo mkhankaso uthathe elinye igxathu njengoba kumenywe abezindaba ukuba babe yingxenye yawo njengoba uqale ngomsombuluko waze waphela ngolwesihlanu. IZINDAWO EZIHEHA IZIVAKASHI
Ngibe nenhlanhla ngaba ngomunye wabamenyiwe ukuchitha izinsuku ezinhlanu kulo mkhandlu, kanti ngifunde okuningi ngawo, ngaphinde ngabona nezindawo ongazivakashela.
Uhlelo luqale emcimbini wokwethulwa kwawo obusemhambi Lodge, erichards Bay. Akukho okutheni okwenzeke kulo mcimbi, ngaphandle kokuchazelwa ukuthi umayelana nani nezindawo ebesizozihambela.
Endaweni yasemthunzini sihambele ulwandle nasejohn Dunn’s Pool and Indaba Tree lapho sifundiswe khona ngomlando kajohn Dunn ochazwe njengomunye wabeluleki besilo ucetshwayo, nokuthi wayenamakhosikazi abalelwa kuma-48, nezingane ezingaphezulu kwama-90.
Okunye okungihlabe umxhwele wukuthola ithuba lokuvakashela lapho kwenziwa isiphuzo itapanga Rum.
Lesi siphuzo senziwa ngezinto ezitholakala kuyona le ndawo, okubalwa kuzo nomoba.
Kuyathokozisa ukubona zanda izindawo ezikhiqiza izinto okungezethu lapha eningizimu Afrika ngoba lokho kwakha amathuba emisebenzi okuyinto okumele ikhuthazwe.
Kudumazile nokho ukungalitholi ithuba lokuya eging War Memorial nalapho kutshalwe khona isilo ucetshwayo.
Ngihlabeke umxhwele ngendawo ishakaland njengoba sifunde okuningi ngomlandlo wakwazulu, nangendlela abantu abebephila ngayo. Le ndawo ivakashelwa kakhulu ngabantu abaqhamuka emazweni aphesheya kwezilwandle, yizingane zesikole, nalabo abazimisele ngokwazi kabanzi ngesikhathi sokubusa kwesilo ushaka.
Isomiso sidla lubi ngempela eningizimu Afrika njengoba sekome gweqe lapho bekunesiphethu umthonjaneni. KUSAKHONYA ABAMHLOPHE Nakuba sihambele izindawo ezahlukene ezigabe ngobuhle nangomlando kodwa kuyadumaza ukuthola ukuthi emkhakheni wezokuvakasha kusakhonya abebala, ngisho nakulezo zindawo eziqhakambisa umlando wakwazulu imbala, yibo abebala abahamba phambili.
Yibona abebala abakhombisa intshisekelo ekufundeni ngomlando wakwazulu bese bakha izindawo zokulala ezisondelene nezakhiwo ezinomlando.
Engxoxweni engike ngaba nayo nonkz Phindile Makwakwa oyibamba lesikhulu esiphezulu kwaTourism Kwazulu-natal (TKZN) ngesikhathi kwethulwa inyanga yezokuvakasha ngomandulo (September), ngithole ukuthi yinto abayigqugquzelayo (TKZN) ukuthi abantu abaqhamuka ezindaweni zasemakhaya ukuba bangene kulo mkhakha wezokuvakasha.
“Siyabakhuthaza abantu ukuba bangene kulo mkhakha ngoba kuningi abangakuhlomula njengoba namathuba emisebenzi angakheka ngawo,” kusho unkz Makwakwa. EZOKUVAKASHA NOMNOTHO Umkhakha wezokuvakasha ungomunye wemikhakha eneqhaza elibaluleke kakhulu ekukhuliseni umnotho wezwe njengoba iningi lezivakashi kuyilezo eziqhamuka ngaphandle kwakuleli. Abantu bayakhuthazwa futhi ukuba bazivakashele izindawo ezisondelene nabo ukuze bazi kangcono ngazo, futhi kuthuthuke nomnotho.
Imeya yasemfolozi umnu Smanga Mgenge ngesikhathi ethula inkulumo emfolozi Bird Park uthe ziningi izindawo zokuvakasha ezikhona kodwa kuyadumaza ukuthi abantu abazi ngazo kwazise uma bebuka lo mkhakha bawu- bukela kude.
“Ukuvakashela indawo yethu kusilethela umnotho kanti kuphinde kwakhe namathuba omsebenzi, ngakho yinto esiyikhuthazayo ukuba abantu basivakashele babuke ubuhle bomfolozi nokunye esinakho endaweni yethu,” esho.
Phakathi kwezinye zezindawo esizivakashelile kubalwa indawo yobumnandi icubana yaserich- ards Bay egabe ngobuhle nangobukhulu, kanti isendaweni egudle ulwandle okwenza abantu abaningi bakuthokozele ukuyihambela.
Evala lo mkhankaso unkk Mkhulisi udalule ukuthi basezinhlelweni zokuwukhulisa lo mkhakha ube ngomunye waleyo ehamba phambili ekwakheni amathuba emisebenzi.
UMA ungena eshakaland kuningi okufundayo ngomlando wakwazulu kanti lezi zintokazi zikhombisa ngezinhlobo ezahlukene zezinkamba.
Umnu Jeff Woollatt ekhombisa ngomshini abawusenzisayo etapanga ukwenza isiphuzo abazakhela sona.
UMNU Mbatha (elingatholakalanga igama lakhe) ekhombisa izivakashi ngendlela amakhosi ayakha ngayo imizi yawo kudala njengoba indlu nendlu inomlando wayo.
IFORT Nongqayi Museum ibalwa nezinye zezindawo zokugcina amagugu ezikhona emlalazi